The House of Us (2019) | MM Movie Store
ကလေးဘဝဆိုတာ လောကကွီးရဲ့ အသဈအဆနျးတှကေို စတငျသငျယူခြိနျမှာမိဘဟာအရေးကွီးဆုံးပါပဲ…ဒီလိုအခွအေနမြေိုးမှာ တဈခုရှိတာက အဆငျမပွမှေုလေးတှကွေုံတိုငျး
ကလေးဘဝရဲ့ ဒုတိယအခငျတှယျဆုံးဟာ သူငယျခငျြးလေးတှပေါပဲ….
မိဘတှရေဲ့ ကှာရှငျးဖို့အထိဖွဈလာတာမြိုးတှေ ဒီပတျဝနျးကငျြမှာ နသေားကတြုနျး ခဏ ခဏ အိမျပွောငျးရဖိွု့ဖဈလာတာမြိုးကွုံရတဲ့ကလေးတှအေဖို့အနာကငျြရဆုံးပါပဲ..ဒီကားလေးထဲမှာ အဲ့လိုအဖွဈမြိုးကွုံကွတဲ့ ကလေးလေး (၃)ယောကျရှိတယျ..
တဈယောကျကအဖနေဲ့အမအေိမျထောငျကှဲဖို့ဖွဈလာတဲ့ကောငျမလေး..ကနျြ(၂)ယောကျက မိဘတှကေ နယျမှာအလုပျလုပျပွီးအလုပျရှိရာမွို့ကိုခဏ ခဏပွောငျးနရေတဲ့မိသားစု ကလေးလေး ၂ယောကျပါ.. သူတို့(၃)ယောကျဟာ ခံစားခကျြခငျြးလညျးတူကွတော့အရမျးခငျကွတယျ…
အိမျရဲ့ဆိုးယုတျမှုတှဟော အခငျြးခငျြးဆုံလိုကျတိုငျး စကားတှပွေောရငျး ကလေးဘဝထငျရာလုပျရငျးပြျောရှငျကွရတယျ…နောကျတို့ သူတို့ကလေး(၃)ယောကျဟာတိုငျပငျကွတယျ..သူတို့တတျစှမျးတဲ့ ဉာဏျကလေးကိုသုံးပွီးမိဘတှမေကှာရှငျးရအောငျရယျ အိမျခဏ ခဏပွောငျးရတဲ့အဖွဈမြိုး နောကျမကွုံရအောငျရယျကိုကာကှယျဖို့ကွိုးစားကွပါတော့တယျ…
ဒီကားလေးဟာ ကလေး(၃)ယောကျကို အဓိကထားရိုကျကူးပွီး သူတို့တှရေဲ့ဖွဈစဉျနဲ့ ကြှနျတျောတို့ကလေးဘဝကအဖွဈမြိုးမတူခဲ့ရငျတောငျ အလားတူခံစားခကျြမြိုးတှရှေိခဲ့တာကွောငျ့ တျောတျောလေးကိုကွညျ့လို့ကောငျးပါတယျ..ရယျလညျးရယျရသလို ဝမျးနညျးသနားစရာလညျးကောငျးလှတာမို့ ခံစားကွညျ့ကွပါဉီး…
ကလေးဘဝဆိုတာ လောကကြီးရဲ့ အသစ်အဆန်းတွေကို စတင်သင်ယူချိန်မှာမိဘဟာအရေးကြီးဆုံးပါပဲ…ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ တစ်ခုရှိတာက အဆင်မပြေမှုလေးတွေကြုံတိုင်း
ကလေးဘဝရဲ့ ဒုတိယအခင်တွယ်ဆုံးဟာ သူငယ်ချင်းလေးတွေပါပဲ….
မိဘတွေရဲ့ ကွာရှင်းဖို့အထိဖြစ်လာတာမျိုးတွေ ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေသားကျတုန်း ခဏ ခဏ အိမ်ပြောင်းရဖို့ဖြစ်လာတာမျိုးကြုံရတဲ့ကလေးတွေအဖို့အနာကျင်ရဆုံးပါပဲ..ဒီကားလေးထဲမှာ အဲ့လိုအဖြစ်မျိုးကြုံကြတဲ့ ကလေးလေး (၃)ယောက်ရှိတယ်..
တစ်ယောက်ကအဖေနဲ့အမေအိမ်ထောင်ကွဲဖို့ဖြစ်လာတဲ့ကောင်မလေး..ကျန်(၂)ယောက်က မိဘတွေက နယ်မှာအလုပ်လုပ်ပြီးအလုပ်ရှိရာမြို့ကိုခဏ ခဏပြောင်းနေရတဲ့မိသားစု ကလေးလေး ၂ယောက်ပါ.. သူတို့(၃)ယောက်ဟာ ခံစားချက်ချင်းလည်းတူကြတော့အရမ်းခင်ကြတယ်…
အိမ်ရဲ့ဆိုးယုတ်မှုတွေဟာ အချင်းချင်းဆုံလိုက်တိုင်း စကားတွေပြောရင်း ကလေးဘဝထင်ရာလုပ်ရင်းပျော်ရွှင်ကြရတယ်…နောက်တို့ သူတို့ကလေး(၃)ယောက်ဟာတိုင်ပင်ကြတယ်..သူတို့တတ်စွမ်းတဲ့ ဉာဏ်ကလေးကိုသုံးပြီးမိဘတွေမကွာရှင်းရအောင်ရယ် အိမ်ခဏ ခဏပြောင်းရတဲ့အဖြစ်မျိုး နောက်မကြုံရအောင်ရယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားကြပါတော့တယ်…
ဒီကားလေးဟာ ကလေး(၃)ယောက်ကို အဓိကထားရိုက်ကူးပြီး သူတို့တွေရဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ကလေးဘဝကအဖြစ်မျိုးမတူခဲ့ရင်တောင် အလားတူခံစားချက်မျိုးတွေရှိခဲ့တာကြောင့် တော်တော်လေးကိုကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်..ရယ်လည်းရယ်ရသလို ဝမ်းနည်းသနားစရာလည်းကောင်းလှတာမို့ ခံစားကြည့်ကြပါဉီး…